Home News Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo kahadlay heshiiskii Ahlusunna iyo Dowlada
Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo kahadlay heshiiskii Ahlusunna iyo Dowlada
Saacado uun kahor ayeey eheeday kadi markii lasoo afjaray Lhilaafkii Dowlada iyo Maakulka Ahlusunna Arintaa ayaa waxaa soo dhaweeyay dhamaan Dadka daneeyay arimaha Galmudug.
Cabdiraxmaan Cabdishakuur Hogaamiyaha Xisbiga Mucaaradka ah ee Wadajir ayaa waxa soo dhaweeyay Heshiiskii.Ahlusunna iyo.Dowladu Maanta wada nasreen;
Waxaan bogaadinaynaa meelmarinta heshiiskii siyaasadeed ee ay horay u wada gaareen dawlada Federaalka ah iyo Ahlusunna. Horay ayaa waxaa u fulay heshiiska dhinaciisii amniga oo ahaa isku dhaf ciidanka, maantana waxaa bilawday dhinicii isku darka siyaasada. Waxaan mahad u jeedinayaa beesha caalamka, gaar ahaan dawlada Maraykanka UN ka, UK iyo EU oo gacan wayn ka gaysatay meel marinta heshiiska labada dhinac.
Waxaa lagama maarmaan ah in la tixgeliyo tabashooyinka beelaha, lana dhagaysto talada waxgaradka iyo saamilayda siyaasadeed ee Galmudug, si loo helo Galmudug loo dhanyahay, wadajirta, shaqayn karta, gaarsiisana dadka iyo deegaanka Galmudug nabad, horumar iyo xasilooni.